Mataura Fare Raiatea - I-Airbnb
Igumbi lakho lokulala e indawo yokuhlala nenesidlo sakusasa sinombuki zindwendwe onguHinano Et Robert
UHinano Et Robert yi-Superhost
I-2 km ukusuka edolophini yase-Uturoa, unokuyonwabela umbono we-Huahine kunye ne-motu ezimbini ze-Ofetaro kunye ne-Teavarua, ngoxolo kunye nokuzola ... Indlu engaselwandle.
Umgaqo wosapho olunomkhosi: gqamisa ukwamkelwa kwefenua, hlonipha inkululeko yabanye, yabelana ngamaxesha olonwabo etafileni xa kunokwenzeka nangokwemfuno.
Ukutshintshela kwisikhululo seenqwelomoya ukuya kwindlu ngeendleko zethu, akukho mfuneko yokuba nexhala malunga nokufika kwakho.
Indlu enemigangatho emibini:
- umgangatho ophantsi uya kuba yindawo yakho yokuhlala ...
- indawo ephezulu ephezulu igcinelwe iindwendwe.
5.0 · Izimvo eziyi-100
Ifakwe kwindawo ejongene nemimoya yorhwebo, indlu ingena umoya kwaye imnandi ukuphumla nokuphumla.
Kufuphi nolwandle, ukuqubha kunye ne-snorkeling kunokwenzeka.
Umbuki zindwendwe ngu- Hinano Et Robert
Akukho mqobo wokukhululeka kwaye ukwazi ukuhambahamba ngokuthanda.
Ukubanakho ukwabelana ngamaxesha okuphumla okanye ukuphumla ngeveki.
Inombolo yomthetho: 656DTO-MT